Ungayenza kanjani iMicrosoft Office 2016 isebenze unomphela - VidaBytes | I-LifeBytes
Ungayisebenzisa kanjani iMicrosoft Office 2016 unomphela
Amanethiwekhi Kunethiwekhi | | Office
Mhlawumbe ucabanga ukuthi ukwenza kusebenze i- I-Microsoft Office 2016 Kuyinkimbinkimbi, kepha sikutshela ukuthi akukaze kube lula kangaka ngaphambili. Ungasebenzisa i-activator office 2016 ngokushesha ngezindlela ezahlukahlukene. Kodwa-ke, ngaphambi kokuchaza ukuthi ungayisebenzisa kanjani, kubalulekile ukuthi uqale ukhulume ngayo I-Microsoft Office 2016 nokuthi ikuphi.
1 Yini iMicrosoft Office 2016?
2 Ungalivula kanjani ihhovisi mahhala?
2.1 Indlela yokuqala: i-serial office 2016 ejwayelekile kanye ne-professional plus
2.2 Uhlu Lokhiye Bomkhiqizo we-Microsoft Office 2016:
2.3 Ukhiye we-MS Office 2016:
2.4 Ukhiye Womkhiqizo Wamahhala we-MS Office:
2.5 Ukhiye womkhiqizo we-Microsoft Office 2016:
2.6 Inombolo Yomkhiqizo ye-MS Office 2016:
2.7 Ukhiye Womkhiqizo we-Full Office 2016:
2.8 Indlela yesibili: yenza kusebenze ihhovisi 2016 ngaphandle kwezinhlelo ngefayela le-bat
2.8.1 Landela izinyathelo ezingezansi ukuze usebenzise i-Microsoft Office 2016:
2.9 Indlela yesithathu: nge-KMS Pico
2.9.1 Izinyathelo zokulanda i-activator ye-office ephelele ye-2016:
3 Indlela yesine: ukusebenza kwe-Office 2016 Professional plus kanye nokujwayelekile nge-Microsoft Toolkit
3.1 Landela lezi zinyathelo ukulanda nokufaka i-Microsoft Toolkit ukuze usebenzise i-Microsoft Office 2016
4 Ungasebenza kanjani ku-Office 2016
5 Imibuzo ebuzwa njalo mayelana nokwenza kusebenze i-Microsoft Office 2016
5.0.1 Kuphephile ukusebenzisa i-Microsoft Office usebenzisa lezi zindlela?
Yini iMicrosoft Office 2016?
I-Microsoft Office 2016 Yinguqulo ye-Microsoft Office productivity suite, kepha iphumelela kokubili i-Office 2013 ne-Office for Mac 2011, futhi yandulela i-Office 2019 kuwo womabili amapulatifomu.
Le nguqulo ye I-Microsoft Office 2016 Ikhonjiswa ngokubukeka okuvuselelwe ngokuphelele okunokusebenza okusha nokubukeka okuthuthukisiwe. Phakathi kwezakhi ezisetshenziswe kakhulu uzothola: iZwi, i-Excel, i-PowerPoint ne-Outlook.
Kulesi sihloko uzothola lonke ulwazi oludingekayo ukuze landa i-Office 2016 32 bits mahhala nge-Spanish ephelele ne-serial futhi nokulanda i-Office 2016 64 bits mahhala nge-Spanish ephelele ne-serial. Khumbula ukulanda kuphela iphakheji ehambisana neprosesa yekhompyutha yakho.
Ungalivula kanjani ihhovisi mahhala?
Uma ungenalo ulwazi lokuthi ungafaka kanjani futhi yenza kusebenze i-Microsoft Office mahhala, asikho isidingo sokukhathazeka, kulesi sifundo uzothola lonke ulwazi oludingekayo igxathu negxathu.
Namuhla kunezindlela eziningi kakhulu yenza kusebenze ihhovisi mahhala kepha mhlawumbe akubona bonke abazosebenza. Abanye bayekile ukusebenza kanti abanye abahambisani nezinhlelo ezithile zokusebenza. Kodwa-ke, lapha sikulethela izindlela ezine ezisebenza ngempela futhi ezikhona namuhla.
Indlela yokuqala: i-serial office 2016 ejwayelekile kanye ne-professional plus
Eyokuqala yezindlela ukudlula ukhiye womkhiqizo futhi lokhu akuyona into edlula isethi yezinhlamvu ezingama-25 zama-alphanumeric. Abanye okhiye bomkhiqizo we I-Microsoft Office 2016 imvamisa banezinhlamvu eziningi. Ukhiye uzoncika endleleni oyithole ngayo. Ngezansi uzothola uhlu lwamakhi okhiye we yenza kusebenze iMicrosoft Office 2016:
Uhlu Lokhiye Bomkhiqizo we-Microsoft Office 2016:
Ingxenye #: PGD67-JN23K-JGVWW-KTHP4-GXR9G
Ingxenye #: FBFPP-2XG5Y-FG9VH-DVQ2Z-QJRCH
Ukhiye we-MS Office 2016:
Ukhiye Womkhiqizo Wamahhala we-MS Office:
Ukhiye womkhiqizo we-Microsoft Office 2016:
Inombolo Yomkhiqizo ye-MS Office 2016:
Ukhiye Womkhiqizo we-Full Office 2016:
Ukuyisebenzisa ngalezi zihluthulelo kufanele uqale uyifake. Uma ungakayifaki okwamanje, lesi yisikhathi esihle sokwenza kanjalo. Okwesibili, uma usufakiwe, kufanele uqale noma iziphi izinsizakalo zayo, ngincoma iZwi. Ngemuva kwalokhu, lapho uqala insizakalo izokucela ngokushesha i-a serial yomkhiqizo futhi ngale ndlela ungayisebenzisa. Kodwa-ke, uma ingabuzi, landela lezi zinyathelo:
Chofoza ku- ingobo yomlando bese ukhetha i-akhawunti.
Thola iseshini «Ukhiye womkhiqizo»E chofoza kukho.
Faka ukhiye womkhiqizo ku- yenza kusebenze i-Microsoft Office bese uqinisekisa iphasiwedi.
Kuzovela umlayezo othi «I-Microsoft Office 2016 yenziwe yasebenza». Ngale ndlela uzoba ne- package I-Microsoft Office 2016 yenziwe yasebenza futhi uzokwazi ukubala konke ukusebenza kwayo.
Uma le ndlela ingakusebenzelanga, kepha usafuna yenza kusebenze iMicrosoft Office 2016, qhubeka ufunde izindlela ezilandelayo.
Indlela yesibili: yenza kusebenze ihhovisi 2016 ngaphandle kwezinhlelo ngefayela le-bat
Le ndlela ilula kancane kepha iyasebenza yenza kusebenze i-Microsoft Office ngaphandle kwezinhlelo futhi ngaphandle kokhiye bomkhiqizo. Kuqukethe ukwenziwa kwefayela le-bat elibhalwe ngaphambilini ukusebenzisa i Ukusebenza kwe-Microsoft Office 2016.
Landela izinyathelo ezingezansi ukuze usebenzise i-Microsoft Office 2016:
Kopisha ikhodi evela kule webhusayithi. (https://www.miblocdenotas.com/279692)
Kudeskithophu yakho ye-PC, qhafaza kwesokudla bese udala idokhumenti entsha yamanothi.
Namathisela ikhodi oyikopishe ekuqaleni bese ugcine idokhumenti njenge- «isisebenzi .cmd»Kufanele ufake amamaki wokucaphuna egameni ukuze igcinwe kahle.
Qalisa ifayela isisebenzi .cmd futhi ake ngenze Ukusebenza kwe-Microsoft Office 2016.
Uma usufinyelele kuleli phuzu futhi walandela zonke izinyathelo, kufanele ube usunayo kusebenze i-Microsoft Office 2016. Kodwa-ke, uma lokhu kungenjalo futhi ukusebenza kuhlulekile, ngincoma ukuthi uqhubeke ufunde izindlela ezilandelayo.
Indlela yesithathu: nge-KMS Pico
para yenza kusebenze iMicrosoft Office 2016 futhi ujabulele imisebenzi yayo, ungasebenzisa ithuluzi Inani le-KMS. Leli thuluzi kulula kakhulu ukulisebenzisa futhi lisebenza kahle ukwenza kusebenze ihhovisi kunoma iyiphi inguqulo. Inani le-KMS es i-activator office 2016 Okunconywe kakhulu, kubhekwa futhi njengesiqeshana esinamandla kakhulu sokuqhekeka kwehhovisi 2016.
Ungakwazi landa i-KMSPico ekhasini layo elisemthethweni, ukuze uqiniseke ukuthi ulanda futhi ufake inguqulo esemthethweni ye- IKMSPico izongena ehhovisi ngo-2016.
Izinyathelo zokulanda i-activator ye-office ephelele ye-2016:
Landa i-KMS Activator office 2016.
Qalisa ifayela le-.exe elilandiwe bese uqinisekisa ukugcina zonke izinsizakalo zivaliwe I-Microsoft Office 2016.
Lapho uhlelo selulayishiwe, chofoza isithonjana I-Microsoft Office 2016 futhi inqubo yokushaja izoqala. Akunandaba nohlobo lwe I-Office 2016 oyifakile, noma kunjalo, izocushwa ngempumelelo. Ungafaka IMicrosoft Office 2016 professional plus 2016 o IMicrosoft Office 2016 ejwayelekile.
Ngemuva kwalokhu, iphakethe lakho ihhovisi 2016 izosebenza ngokuphelele futhi Isisebenzisi seMicrosoft Office 2016 KMSPico izobe iwenzile umsebenzi wayo.
Qinisekisa ukuthi i- Ukusebenza kwe-Microsoft Office 2016 kwenziwe ngendlela efanele. Vula isevisi ye-Office 2016, chofoza ifayela, bese ukhetha i-akhawunti.
Esigabeni Imininingwane yomkhiqizo umyalezo kufanele uvele Umkhiqizo ocushiwe. Uma kungenjalo, kukhona okungahambanga kahle futhi ngincoma ukuthi uzame le ndlela futhi.
Uma ngemuva komunye umzamo awukwazanga ukwenza kusebenze umkhiqizo wakho kusuka ku- I-Microsoft Office 2016, Ngincoma ukuthi usebenzise indlela elandelayo.
Indlela yesine: ukusebenza kwe-Office 2016 Professional plus kanye nokujwayelekile nge-Microsoft Toolkit
Le ndlela ifana kakhulu ne- I-KMS Pico yehhovisi 2016 kepha isesikhathini kakhulu futhi ine-interface enobungane. I-Microsoft Toolkit igama laleli thuluzi elizokusiza yenza kusebenze iMicrosoft Office 2016. Njengamanje, leli yilona kuphela ithuluzi eliphumelelayo elihlala liphumelela ngo-100%. Kumahhala, kulula ukuyisebenzisa futhi akunalo igciwane ngokuphelele, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke.
I-Microsoft Toolkit ngaphambi kokuba kwaziwe ngokuthi I-EZ Activator futhi yathuthukiswa ngo-2010 yilungu eliyinhloko le- Life My Digital. Leli thuluzi lisebenza kahle ku- imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi, ngakho-ke ngeke udinge i-Intanethi ukwenza kusebenze i-Office 2016 yakho.
Ukuze usebenzise leli thuluzi, kufanele uqale khubaza okwesikhashana i-antivirus yakho. Lokhu kungenxa yokuthi i-activator yisiqephu esizoguqula ikhodi yephakheji yakho ye-Office 2016 bese siyenza isebenze. Ungakhathazeki, ngemuva kwalokhu, ungaphinda usebenzise i-antivirus yakho futhi uqhubeke nokuvikela ubumfihlo bakho.
Landela lezi zinyathelo ukulanda nokufaka i-Microsoft Toolkit ukuze usebenzise i-Microsoft Office 2016
Landa I-Microsoft Toolkit ekhasini layo elisemthethweni.
Vula ifayili I-Microsoft Toolkit.rar oyilandile. Iphasiwedi yefayela le-.rar ithi "esemthethweni-kmspico.com”. Ngemuva kwalokhu, sebenzisa ifayela I-Microsoft Toolkit.exe ukuqala uhlelo.
Uzobona ibhokisi lamathuluzi eline-Office neWindows logo esikrinini. Khetha ilogo yeHhovisi ukuze uqhubeke.
Iwindi elisha le-pop-up lizovela nezinketho eziningi ezifakiwe. Chofoza kuthebhu Ukuqalisa bese uqhafaza I-EZ-Activator. Le nqubo izothatha imizuzwana embalwa ukuqeda.
Ngemuva kwalokho, ungabona iwindi lomyalezo lisho lokho I-Office 2016 yenziwe yasebenza.
Ngale ndlela iphakethe lakho le-Office 2016 lizosebenza unomphela. Ukuhlola isimo somkhiqizo wakho, qala insiza ye-Office 2016, chofoza Ifayela> i-akhawunti> ukusuka lapho ungabona umlayezo Umkhiqizo ocushiwe.
Yilokho kuphela, ngale ndlela ungasebenzisa noma iyiphi inguqulo ye- I-Microsoft Office unomphela. Futhi, leli thuluzi lisetshenziselwa ukwenza kusebenze izinhlobo zeWindows.
Ungasebenza kanjani ku-Office 2016
Ngale vidiyo elula uzofunda ngendlela elula kakhulu ukwenziwa kusebenze kwe-Office 2016 ebuyekeziwe.
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana nokwenza kusebenze i-Microsoft Office 2016
Kuphephile ukusebenzisa i-Microsoft Office usebenzisa lezi zindlela?
Yebo, kunjalo, ukwenza i-Office isebenze kunoma iyiphi yalezi zindlela kuphephile futhi kuvikelekile ngo-100%. Kodwa-ke, kufanele ulandele zonke izinyathelo ezikhonjisiwe ukuqinisekisa inqubo ephumelelayo.
Ngenzenjani uma ilayisense iphela ngemuva kwesikhashana?
Uma ngemuva kwesikhashana ilayisense iphela futhi ingakuvumeli ukuthi usebenzise yonke imisebenzi, sekuyisikhathi sokusebenzisa isisebenzisi futhi. Ngincoma ukuthi usebenzise indlela ye- I-Microsoft Toolkit ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle kokusebenzisa i- I-Microsoft Office 2016.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Office » Ungayisebenzisa kanjani iMicrosoft Office 2016 unomphela
Ukwakhiwa kweseva yeklayenti kwimininingwane yedatha!
Kuyini i-middleware? Umlando, izinhlelo zokusebenza, nokuningi